အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: မင်္ဂလာ
မနက်ခင်း အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ် G-talk မှာဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေများ သူငယ်ချင်းများ တွေ့ကြရင် မင်္ဂလာပါ . . . လို့ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လူလူချင်းတွေ့တာ နဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ မင်္ဂလာပါ လို့ နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါ စိတ်မှာ ကျေနပ်မှုတစ်မျိုးခံစားရပါတယ်။ (ဒီမှာတော့ 'ဆ၀ါဒီခပ်' လို့ ယိုးဒယားလိုနှုတ်ဆက်တာများပါတယ်၊ တစ်ချို့ ကတော့ morning လို့ နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။)
ဒီလိုနေ့စဉ်နှုတ်ဆက်နေပေမယ့် လူလူချင်းတွေ့တာ မင်္ဂလာ တဲ့လားလို့ ကြောင်တောင်တောင်အတွေး ၀င်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ မင်္ဂလာ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သိအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တေးထားခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးတဲ့ "ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ရင်း ရွတ်ဖတ်ရန်သုတ်တော်များ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က မင်္ဂလသုတ် ကို သွားတွေ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီကျမှ မင်္ဂလာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနားလည်ပြီး ၊ မင်္ဂလာတရား(၃၈)ပါးရှိကြောင်းကိုပါ အသေးစိတ် သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီမင်္ဂလသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က လူတွေလည်း ကျွန်တော့လို့ပဲ တွေးကြလို့ ထင်ပါတယ်။ :P
ဒီမင်္ဂလာတရားဆိုတဲ့ဟာကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော် အငြင်းပွားကြပါသတဲ့။ သူပြောတာကမှ မင်္ဂလာတရား ၊ ငါပြောတာကမှာ မင်္ဂလာတရားအမှန်ဆိုပြီး အဲဒီခေတ်က ပုရဏ္ဏကဿပတို့ မဂလိကောသာလတို့လို အတွေးအခေါ်ဂိုဏ်းဆရာကြီးအပါအ၀င် အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေ အငြင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအငြင်းပွားနေကြလို့ ဘယ်ဟာကို မင်္ဂလာတရား ဆိုပီး သတ်မှတ်လက်ခံခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီအငြင်းပွားမှုမှာ လူတွင်မက နတ်တွေကြားမှာတောင် မင်္ဂလာတရားအစစ်အမှန်ကို မည်သူမှ သေသေချာချာ မသိကြပါဘူး။
ဒီလို အငြင်းပွားမှုဟာ ဆယ့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို သိချင်နေတဲ့ နတ်သားတစ်ပါးက မြတ်စွာဘုရားကို မေးမြန်းလျှောက်ထားပါတယ်။ ဒီကျမှ မြတ်စွာဘုရားက မင်္ဂလာတရားတွေကို ဟောကြားခဲ့တာပါ။ ဒီမင်္ဂလာတရားကို မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ချိန်မှာ နတ်သားက မေးလျောက်လို့ ဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဇေတ၀န်ကျောင်းကို အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပါသည်။)
ကောင်းခြင်း။ ပွားခြင်းသို့ရောက်ခြင်း။ ချီးမွမ်းအပ်သောကောင်းမြတ်သော တရား။ စီးပွားချမ်းသာ၏ အကြောင်းဖြစ်သောတရား။ မင်္ဂလာတရား။
ဆိုပြီး အဘိဓာန်မှာ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ အချက်(၃၈)ချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် တကယ့်ကို တက်တက်ကြီးပွားပီး မိမိ၏ဘ၀အဆင့်အတန်း သည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးတက်အောင်မြင် ချမ်းသာမည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပါသည်။ မိမိအား မကောင်းကြံမည့်သူများလည်း မတတ်နိုင်ပါ။ ရန်အပေါင်းကင်းဝေးပီး ပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောဘ၀တစ်ခု ကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
နံပါတ်တစ် ကတော့ " အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ" လူမိုက်ကို မပေါင်းရဘူးတဲ့။ ဆိုတော့ လူမိုက်ဆိုတဲ့ဟာကို ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လည်း လိုလာပြန်ရော။ ဘယ်လိုလူကို လူမိုက်လဲ။ ဘယ်လိုပေတံမျိုးနဲ့ တိုင်းတာမှာလဲ။
နံပါတ်နှစ်က "ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေ၀နာ" ပညာရှိနဲ့ ပေါင်း။ ဒီမှာတစ်ခါ ဘယ်လိုပညာရှိမျိုးလည်း သိချင်လာပြန်ရော။
နံပါတ်သုံးက "ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ" ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ပါ။ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ပူဇော်ရမှာလည်း?
နံပါတ်လေး "ပတိရူပဒေသ၀ါသော စ" သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ဒေသမှာနေပါတဲ့။ ဘယ်လိုဒေသလဲ ဆိုတော့ ဥစ္စာစီးပွား သော်လည်းကောင်း၊ အတတ်ပညာတစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း ဒီသုံးခုထဲက တစ်ခုခု နေ့စဉ်ရတဲ့ ဒေသတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
သင်တို့ရော... ဘယ်လိုဒေသမှာ နေကြပါသလဲ?
နံပါတ်ငါး "ပုဗ္ဗေ စ ကတပုညတာ" ရှေးကပြုခဲ့ဖူးသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲတဲ့။
နံပါတ်ခြောက် "အတ္တသမာပဏိဓိ စ" မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းဆောက်တည်ခြင်း။ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းဆောက်တည်ရင် ကောင်းမလဲ?
နံပါတ်ခုနစ် "ဗာဟုသစ္စဉ္စ သိပ္ပဉ္စ" ဗဟုသုတ အကြားအမြင်များခြင်း၊ စက်မှုလက်မှု စသောအတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်သည်။
နံပါတ်ရှစ် "၀ိနယောစ သုသိက္ခိတော" လူကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ လိုက်နာခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါး ဆိုတော့ အင်း လူ့ကျင့်ဝတ်တွေဟာ နေရာဒေသ ကိုလိုက်ပြီး တစ်ချို့စည်းကမ်းယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်လေတော့ ဘယ်လိုဟာကို လိုက်နာရမလဲ?
နံပါတ်ကိုး "သုဘာသိတာ စ " ကောင်းသောစကားတို့ကိုပြောဆိုခြင်းသည် မင်္ဂလာ။
နံပါတ်တစ်ဆယ် "ပီယ ၀ါစာ" ချိုသာယဉ်ကျေးစွာ စကားပြောဆိုခြင်းသည် မင်္ဂလာ။
နံပါတ်တစ်ဆယ့်တစ် "မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ" မိဘနှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးခြင်းသည် မင်္ဂလာတဲ့။
နံပါတ်ဆယ့်နှစ် "ပုတ္တဒါရဿ သင်္ဂဟော" သားမယား ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာပါပဲ။
(ဒီမင်္ဂလာတော့ အားလုံးနီးပါးရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ :P)
နံပါတ်ဆယ့်သုံး "အနာကုလာ စ ကမ္မန္တာ" မည်သူ့မျှ မထိခိုက်သော အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးခြင်း။ ဒီဟာလည်း နားလည်သလိုလိုနဲ့ သေသေချာချာသိဖို့ လိုပြန်ရော။
နံပါတ်ဆယ့်လေး "ဒါနဉ္စ " လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်သည်။
နံပါတ်ဆယ့်ငါး "ဓမ္မစရိယာ စ" မြတ်သောတရားအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း။ ဘယ်လိုတရားမျိုးကို မြတ်တဲ့တရားလို့ ခေါ်မလဲ?
နံပါတ်ဆယ့်ခြောက် "ဉာတကာနဉ္စ သင်္ဂဟော" ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများကို ထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတရားဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်ဆယ့်ခုနစ် "အန၀ဇ္ဖာနိ ကမ္မာနိ" အကုသိုလ်ကင်းသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတရားဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်ဆယ့်ရှစ် "အာရတီ ပါပါ " မကောင်းမှုကို ဝေးဝေး ရှောင်နိုင်ခြင်း၊
နံပါတ်ဆယ့်ကိုး "၀ိရတီ ပါပါ" မကောင်းမှုကို မလုပ်ဖြစ်အောင် အထူးရှောင်နိုင်ခြင်း၊
နံပါတ်နှစ်ဆယ် "မဇ္ဖပါနာ စ သံယမော" မူးယစ်သေစာ(အရက်၊ဘီယာ၊၀ိုင်၊ narcotic drugs) သောက်စား သုံးစွဲခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်တစ် "အပ္ပမာဒေါ စ ဓမ္မေသု" ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို မပြတ်သတိရပြီး မမေ့မလျော့ ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့သည်လည်း မင်္ဂလာတရားများဖြစ်သည်။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်နှစ် "ဂါရဝေါ စ" ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များကို ရိုသေထိုက်တယ်လို့ ဆိုရမလဲ?
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်သုံး "နိဝါတော စ" မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းသည် မင်္ဂလာဖြစ်သည်။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်လေး "သန္တုဋ္ဌိ စ " ကာမဂုဏ်အာရုံတို့၌ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာ။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်ငါး "ကတညုတာ" သူတစ်ပါး၏ ကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာ။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်ခြောက် "ကာလေန ဓမ္မဿဝနံ" အခါအခွင့်သင့်တိုင်း တရားနာခြင်း။ ဘယ်လိုတရားမျိုးကို နာရမလဲဆိုတာလည်း ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ လိုပါတယ်။ တရားတွေက များတယ်လေ။ :)
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်ခုနစ် "ခန္တီ စ" သည်းခံခြင်းသည် မင်္ဂလာဖြစ်သည်။ သတိပြု ကျင့်သုံးဖွယ်ပါပဲ။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်ရှစ် "သောဝစဿတာ" သူတော်ကောင်းတို့က ဆုံးမသည့်စကားကို နာယူလွယ်ခြင်း သည်လည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပါ။
နံပါတ်နှစ်ဆယ့်ကိုး "သမဏာနဉ္စ ဒဿနံ" ရဟန်းသံဃာများကို ဖူးမြော်ရခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပါ။
(ဘယ်လိုဘုန်းကြီး ကိုရင်ပဲ တွေ့တွေ့ သံဃာတော်ပါလားဆိုပီး ဦးတိုက်ရှိခိုးပါ။ အကျိုးများပါတယ်။ ကိုယ်ဦးတိုက်တာက ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးတိုက်တာမဟုတ်ပဲ သံဃာတော်ဆိုပီး ရည်မှန်းဦးတိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကျုိုးများတယ်လို့ ပြောတာပါ။)
နံပါတ်သုံးဆယ် "ကာလေန ဓမ္မသာကစ္ဆာ" အခါအခွင့်သင့်တိုင်း တရားဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။ ဘယ်လိုတရားမျိုးကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရမလဲ?
နံပါတ်သုံးဆယ့်တစ် "တပေါ စ" ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး။
နံပါတ်သုံးဆယ့်နှစ် "ဗြဟ္မစရိယဉ္စ" မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း။ ဘယ်လိုအကျင့်က မြတ်သလဲ?
နံပါတ် သုံးဆယ့်သုံး "အရိယသစ္စာန ဒဿနံ" အရိယာသစ္စာတရားကို သိမြင်ရခြင်းသည် မင်္ဂလာ။
ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ သစ္စာတရား လေးပါးရှိပါတယ်။ (သမုဒ္ဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ၊ နိရောဓသစ္စာ)
အဲဒီ လေးပါးကို သိဖို့ မြင်ဖို့ ဆိုတာကျတော့ တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။
နံပါတ် သုံးဆယ့်လေး "နိဗ္ဗာနသစ္ဆိကိရိယာ စ" နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာ။
ဒါလည်းပဲ ပိုပီး ခက်ခဲပါတယ်။
"ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ" လောကဓံတရားရှစ်ပါးနှင့် တွေ့ကြုံပါက-
နံပါတ်သုံးဆယ့်ငါး "စိတ္တံ ယဿ နကမ္ပတိ" စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာ၊
နံပါတ်သုံးဆယ့်ခြောက် "အသောကံ" စိုးရိမ်သောက မရှိခြင်းသည် မင်္ဂလာ၊
နံပါတ်သုံးဆယ့်ခုနစ် "၀ိရဇံ" ရာဂရမက်ကင်းခြင်းသည် မင်္ဂလာ၊
နံပါတ်သုံးဆယ့်ရှစ် "ခေမံ" ဘေးကင်းခြင်းသည် မင်္ဂလာ၊
ဆိုပြီး မင်္ဂလာတရားအစစ်အမှန်များကို မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားထားခဲ့ရာမှာ မိမိသန္တာန်မှာ အဆိုပါ တရားဘယ်နှစ်ခု ကိန်းနေပါသနည်း။
များများ ကိန်းသူများ လက်ရှိဘ၀ ရော နောင်ဘ၀ပါ စိတ်အေးရမည်။ လက်ရှိ ဘ၀အဆင်မပြေ သူများ ကြိုးစားဖြည့်တင်းက အစစအရာရာ အဆင်ပြေ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးပြည့်ရန်ကား လူအဖြစ်နှင့် မလွယ်ကူချေ။ တတ်နိုင်သမျှ များနိုင်သမျှ များများ ဖြည့်ကျင့်ရမည်သာဖြစ်ပေသည်။
posted by အတ္တ @ November 18, 20092Comments
At November 18, 2009 at 6:55 AM , ဗလာဗလာဗလာ said...
At November 18, 2009 at 8:50 AM , ဆောင်းမြူခိုး said...
့ငယ်ငယ်ကနွေရာသီ .. ချမ်းမြေ့ ကျောင်းမှာ ရိပ်သာဝင်ရင်
ငါတို့ က ကလေးတွေဆိုတော့ တရားသိပ်မထိုင်ရဘူး...
အဲ့ဒါတွေ ကျက်ရတယ်..နောက် အဲ့ဒါတွေကို စာမေးပွဲပြန်ဖြေရတယ်လေ..